ဤသည်မှာ Fortnite taymaking ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် Androidsis
Fortnite သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဝက်အတွင်းအထူးသဖြင့်မကြုံစဖူးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည် ကစစ်တိုက်တော်ဝင် mode ကိုမွေးစားကတည်းက။ ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကစားနိုင်ခြင်းသည်ဤဂိမ်း၏အောင်မြင်မှုကိုသာတိုးပွားစေပြီးလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်ပုံကိုသိရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော update တွင် Fortnite မှယောက်ျားများသည်ဂိမ်းအတွက် bot များလာမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် အတွေ့အကြုံနည်းသောသုံးစွဲသူများကိုခွင့်ပြုသည် နှင့်သူတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာဂိမ်းစွန့်ခွာဖို့မဟုတ်, အစဖြစ်ကြောင်း။ နောက်ထပ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမှာကြာရှည်စွာစောင့်စားခဲ့ရသောပွဲစဉ်ဖြစ်သည်။
Fortnite အောင်သွယ်စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည် အလားတူကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုသူများနှင့်ကိုက်ညီ ဒီတော့လူသစ်တွေဟာဆောက်လုပ်ရေးပညာရှင်တွေကိုလက်မခံကြဘူး။ သို့သော် Epic Games တွင်သူတို့သည်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းသဘောတရားကိုအပြည့်အ ၀ နားမလည်ပုံရသည်။
Fortnite ကိုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများ၊ ခလုတ်များနှင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ပုံမှန်နှင့်ယုတ္တိ matchmaking ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုအလားတူစွမ်းရည်များနှင့်ကိုက်ညီစေသည် သို့သော်ယခုအချိန်အထိလုပ်နေကြသည့်တူညီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုအတွင်း၌ - မိုဘိုင်း / Nintendo ခလုတ်နှင့်အတူမိုဘိုင်း / နင်တိုဒိုခလုတ်၊ ခလုတ်များနှင့်ခလုတ်ကိုင်ထားသောကွန်ပြူတာ / ခလုတ်အသုံးပြုသူများနှင့်ကွန်ပြူတာ / ခလုတ်အသုံးပြုသူများကိုမိုဘိုင်း / ကီးဘုတ်နှင့်အတူကွန်ပျူတာ / console အသုံးပြုသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
အကြောင်းပြချက် မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကို Nintendo Switch နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပါ ငါတို့မိုဘိုင်းပစ္စည်းနဲ့ controller ကိုတွဲပြီး Nintendo Switch လုပ်သလိုကစားလို့ရတယ်၊ လူတိုင်းမှာထိန်းချုပ်မှုလက်မရှိဘူး။ မကြာသေးမီကဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော Fortnite ၏ထိပ်တန်းဆုံးဖြတ်ချက်များ။
ကောင်းပြီ။ Epic Games သည်သူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှင်းပြသည့်ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူတို့ဆိုကြသည် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Fortnite စက်တစ်လုံးဖြစ်လျှင်အလားတူစွမ်းရည်ရှိသူများနှင့်သင်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်လိမ့်မည်။ \_ t သငျသညျ console ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစားနေလျှင်ပင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်ပွဲစဉ်စနစ်အသစ်နှင့်ကစားသူအားလုံးအတွက်မျှတသောဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီ၏အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကစားသမားများသည် mouse နှင့် keyboard, control, တို့ထိတို့ပါ ၀ င်မှုများပေါ်တွင် မူတည်၍ ALL platform များမှအလားတူစွမ်းရည်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်သင်၏တုံ့ပြန်ချက်များအားလုံးကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီးလူတိုင်းမျှတသောဂိမ်းကစားရန်သေချာစေရန်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ယခု Fortnite ၏သုံးစွဲသူနှင့်ဝင်ငွေကိန်းဂဏန်းများသည်ယခင်ကာလများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စတင်ကျဆင်းလာသည်Bot အသစ်များအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကဂိမ်းကိုယုံကြည်မှုရှိသူများကိုဆက်လက်ထားရှိလိုလျှင်၊ လုံးဝစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ် နှင့်ရေရှည်တွင်၊ သူတို့ကမပြောင်းပါကအသုံးပြုသူများသည်အခြားသုံးစွဲသူများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းကိုငြီးငွေ့လာကြလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်အထိယခုနှစ်တွင်အတွက်, Fortnite မှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်နောက်ဆုံးရာသီနှင့်လက်ရှိရာသီအတွက်အပြောင်းအလဲများစွာသည် GROSS စက်ရုပ်ကစားနည်းတွင်ဂိမ်းကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
2 အဘယ်အရာကိုအနာဂတ် Fortnite စောင့်မျှော်?
(၇) နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ Fortnite ဟာကလေးငယ်များကြားမှာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်အသက်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Fortnite ဟာသုံးစွဲသူများကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ ငါ့သားကတခြားဂိမ်းမျိုးတွေကိုမွေ့လျော်ခဲ့တယ် ဘုံ Royale (လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်မရရှိနိုင်ပါ)၊ လူသိနည်းသောလူသိနည်းသောစစ်ပွဲတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးသည်သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုထွက်ခွာသောအခါကြက်တစ်ကောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်၊ သို့သော်အတန်းဖော်များနှင့်ကျောင်းနေဖက်များက၎င်းကိုစွန့်ခွာပြီးဤဂိမ်းသို့မဟုတ်အနန္တတန်ခိုးရှင်ကိုကျော်လွန်သွားသည်။ Minecraft.
အကြောင်းပြချက်သည်ပျော်ရွှင်သောပွဲစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တွဲဖက် ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်သူငယ်၏သည်းခံခြင်းစားသုံးကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ပါကစိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးသဖြင့်သူတို့လိုချင်သောအရာများမရရှိသည့်အခါသင်သိလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရလျှင်တစ်ခုတည်းသာကျွန်ုပ်အရေအတွက်ကိုမပြောနိုင်ပါ။
သို့သော်၎င်းသည်အငယ်ဆုံးသောသက်ရောက်မှုကိုသာသက်ရောက်စေသည် ဆယ်ကျော်သက်များလည်းပင်ပန်းနေကြသည်. PUBG Mobile သည်ငွေရှာစက်ဖြစ်လာသည် မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်။ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင့်တွင်စျေးကွက်ဝင်ချိန် မှစ၍ တူညီသောအဆင့်ရှိသုံးစွဲသူများနှင့်တူညီသည့်သင့်တော်သည့်ပွဲစဉ်တစ်ခုရှိပါကဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အစပိုင်းအဆင့်များတွင်အသုံးပြုသူများကိုအတွေ့အကြုံရနေစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စက်များရှိသည်။
Call of Duty: မိုဘိုင်း
Tencent မှနောက်ဆုံးထုတ် PUBG Mobile သည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည် Call of Duty: မိုဘိုင်း။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား PUBG Mobile ကဲ့သို့တူညီသောအရည်အသွေးများကိုပေးထားသည်။ ဒါ့အပြင် ဒီခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးမှာ crossover play မရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Controller ကိုအသုံးပြုဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါ ဖန်သားပြင်မှတဆင့်ထက်ပိုမိုအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့လမ်းကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုအနာဂတ် Fortnite စောင့်မျှော်?
လာမည့် Fortnite ရာသီနံပါတ် ၁၁ နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများကထိုအချက်ကိုအကြံပြုသည် ငါတို့သိသည်အတိုင်းကျွန်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်မြေပုံအသစ်ထည့်ပါ ပထမရာသီ (၁၀) ခုအတွင်း Epic သည်မြေပုံပေါ်ရှိအချို့နေရာများတွင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်၍ အများစုကိုသိမ်းထားသည်။
ဒါဟာ Twitch လိုမျိုး streaming ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းတွေကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ဒီဂိမ်းအတွက်နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်မြေပုံအသစ်ကဂိမ်းဟာနာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာအခုလိုအပ်နေတဲ့ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ Ninja နှင့် Shroud သူတို့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၏မီဒီယာကြယ်များဖြစ်လာကြပြီ။
PUBG သည် PC နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးတွင်စျေးကွက်၌ရောက်ရှိနေသည့်နှစ်များအတွင်းမြေပုံအသစ်များကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။ လောလောဆယ်4စုစုပေါင်းရှိသည်။ ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင် PUBG ၏တီထွင်သူသည်သစ္စာစောင့်သိသောအသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်းရှိသည့်ကစားသမား၏စွမ်းရည်၊ လက်နက်အသစ်များ၊ မော်တော်ယာဉ်အသစ်များနှင့်မြေပုံများကိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ Erangel နှင့် Miramar ကဲ့သို့သော Fortnite ၏နှစ်ဆအရွယ်အစား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ဤသည်မှာ Fortnite taymaking ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်